Matte Black Donsela phansi Ikhishi ompompi
Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Matte Black Donsela phansi Ikhishi ompompi
2020 / 10 / 27 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 851 0
Abantu abaningi kulezi zinsuku lapho bezama ukugcwalisa amakhaya abo amasha baqala ukufuna izinto ezinhle nezijabulisayo. Kepha uma kukhulunywa ekhishini abantu bafuna okuthile kwesimanje nokusha, okuthile okungaletha yonke indawo kuphile futhi kulethe lokho kubukeka okuhle kulo mkhuba. Ukukhuluma ngekhishi kubalulekile umqondo wokuba ne- ompompi omnyama wasekhishini iyazamazama phakathi kwezifunda eziningi zomhlaba.
Ingabe abantu ngokungazelelwe banokuthile okuphikisana nensimbi engagqwali? Cha, akunjalo kodwa inkambiso njengoba sazi ukuthi iyashintsha ngokungaguquguquki futhi futhi iyashesha futhi. Ubuntu obunamandla bekhishi lakho bungakhuliswa ngokusebenzisa imibala egqamile emnyama futhi yini emnyama kunompompi ombala omnyama we-matte? Kungakho abantu bewuthanda umqondo wokuba neyodwa ekhishini labo. Uma kuba nzima kakhulu kuwe ukuthi ugaye bese ulandela izizathu ezimbalwa zokuthi kufanele ufunde okungenani kanye ngaphambi kokungena kunoma yisiphi isiphetho esisheshayo;
1. Ukugqamisa amaribhoni wamalahle
Uma unamaribhoni amalahle kusitafula sakho kunokusebenzisa ipompo elenziwe ngombala noma insimbi engenazinsimbi ngeke ubenzele ubulungiswa. Hhayi ukubukeka kwabo kuphela okuzoncipha kepha maningi amathuba okuthi abantu abaningi ngeke bakwazi ukuqonda umehluko wokuthi ngabe akhona yini amaribhoni amalahle. Kepha ngompompi omnyama wasekhishini akuzogqanyiswa kuphela amaribhoni kepha kuzokwengeza nobukhazikhazi obungekho.
2. Ukusebenza okubili
Eziningi zalezi zimpompi zekhishi elimnyama ziza nokukwazi ukusebenza okumbaxambili kokuzisebenzisa njengesifutho nokuhlanza ngokuphelele izitsha zanoma yiluphi uhlobo. Ukuzungezisa okungama-360-degree kuzovumela ukuhlanzwa okufushane nokusebenzisa isici ukwenza ukuhlanza noma ukuhlanza ama-countertops nezinye izindawo ezihambisanayo.
3. Ngokwakha iphuzu lokugxila
Esinye sezizathu eziningi zokuthola umpompi wasekhishini ukudala indawo yokugxila ekhishini okusho ukuthi kungakha umuzwa ocacile wobuhle obuhle nobuhle ekhishini lakho. Lokho kungasetshenziselwa ukufanisa amanye ama-aesthetics amahle emakhishini akho njengamathayili amhlophe, izibani zesimanje, nokunye okuningi. Okusemqoka ukuthi ungaqhamuka nanoma iyiphi indawo okugxilwe kuyo ngompompi omnyama wasekhishini ekhaya lakho.
4. Thuthukisa umuzwa wakho wendlela yezobuchwepheshe
Kuyoze kube nini uhlala ulahlekile esikhathini esedlule? Ukufaka isikhathi esingakanani ukwakheka okusha nokugobekile kwendlela endala engenazinsimbi kungakwanela wena? Kungakho ukuze usethe ukunambitheka kwakho kubheke entweni ethokozisayo nokuthile okuthatha ijubane ngokwamadijithi kubalulekile ukuthi uye kompompi ompofu wasekhishini, kungahle kube ukuphela kwento obukade uphuthelwa yiyo ngenkathi udizayina ingaphakathi lekhishi lakho.
Lezi bekuyizizathu zokuthi uhumushe ukuthi kungani ukuba nompompi omnyama ekhishini lakho kufanele ube nakho, ungahlali ezintweni ezifanayo ezingagqwali, bese uqhubeka nokusha nokwesimanje futhi ngasikhathi sinye okunenzuzo ukusetshenziswa kwakho.
Edlule :: Khetha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esisebenza ngamanzi esihambisana kakhulu nezindinganiso zokuphila zesimanje Olandelayo: Ngingayitholaphi I-Faucet Ikhishi Ehamba phambili?